Maalinta: Sebtember 26, 2019
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu, dhulgariir Silivri ku saleysan kadib cabirka 5.8 AKOM'a ayaa dhaafay. Imamoglu, oo raba inuu dhaafo muwaadiniinta reer Istanbul iyo magaalooyinka ku xeeran, ayaa sheegay in dhulgariirku uu digniin u yahay. dhulgariir, [More ...]
Degmada İzmir ee Xarunta Iskuxirka Gaadiidka (UKOME) Golaha Guud ee Magaalada İzmir Magaalo Weynaha, oo joojisay howlihii firfircoon ee gobolka İzmir, waxay soo iibsatay faraska 36 iyo 16 phaeton kadib markii ay dhameystirtay qawaaniinta sharciga. [More ...]
Bandhigga Gacanka 'Gulfzmir Gulf Festival', kaas oo ay soo qaban qaabin doonto Magaalada İzmir ee Magaalo Weyn ee '27-29 September', wuxuu keenayaa riwaayado, bandhigyo iyo nashaadaadyo kale oo xiise leh oo ay weheliso tartamada badda. Markii saddexaad ee sanadkan [More ...]
Ciyaartooyda xulka Qaranka Batuhan Bugra Eruygun ayaa la tartamaysa Tram
Orodyahanka ku guuleysta abaalmarinta Batuhan Buğra Eruygun, Dhacdooyinka Toddobaadka Isboortiga ee Yurub ee tareenka u dhexeeya Eminönü-Karaköy ayaa joogsanaya. Eruygun ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee gaadha xariiqda dhammaystirka. Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), 23-30 sababtuna tahay isbuuca isboorti ee Yurub [More ...]
2. Bandhigga Baaskiilka Caalamiga Alanya ayaa bilaabmaya
2 waxaa qaban qaabin doona xafladaha.com.com oo ay kaashanayaan degmada Alanya. Bandhigga Caalamiga ee Baaskiilka Alanya ayaa bilaabanaya berri. Dadka 27-29 35, oo ay ku jiraan 300 oo ka soo jeeda Alanya, ayaa ka qaybqaadan doona xafladda lagu qaban doono Kestel inta u dhexeysa Sebtember. [More ...]
15 waa la xirayaa illaa saacadaha 21.00-06.00 illaa Oktoobar sababtoo ah dayactirka superstructure-ka iyo dayactirka ayaa udhaxeeya Izmit East Junction iyo Adapazarı tolls ee jihada Anatolian ee wadada weyn ee Anatolian. Sida ku xusan qoraalka Gudoomiyaha. [More ...]
Codsiga kirada baaskiilka ayaa laga bilaabay N 30 August Zafer Park ğı oo uu furay Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş. Waxay ku taal meel u dhow AŞTİ oo noqoneysa barta laga baxo magaalada caasimada ah, 2 bin 500 [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Erzurum, oo ah xarunta magaalada ee shaqada hoosaadyada iyo dhaqan dhismeedka ayaa soo dhow gabagabada. Waxay ku taal bartamaha ilaa laga gaadhayo isku xirka wadooyinka metsmetpa Streeta Street iyo Palandöken State Hospital oo laga helo wadada xiriirisa PTT iyo Booliska. [More ...]
Metro hostel, hostel-kii ugu horreeyay ee Yukreeniyaan ee adeegsada gaari-tareenka dhulka hoostiisa mara, ayaa laga furay degmada Podol ee Kiev. Waxay ku qalabeysan yihiin gawaarida, qol kasta waxaa lagu magacaabaa saldhig caan ah oo ka socda nidaamka tareenka adduunka. Sidoo kale darbiyada qolalka [More ...]